Maskaxda: Barnaamij furan oo iskutallaab ah oo loogu talagalay wax soo saarka | Laga soo bilaabo Linux
Marar kale waxaan ka hadalnay codsiyada hagaajinta wax soo saarka isticmaalaha miiska kombiyuutarkooda. Maqaalka maanta, mar kale ayaan ka hadli doonnaa Maskaxda, taas oo ah mid xiiso leh oo shaqeyneysa ilo furan iyo iskutallaab codsi, aad u faa'iido badan dareenkaas.
Asal ahaan, Maskaxda waa a Bilow, taas oo ka mid ah shaqooyin iyo astaamo badan, waxay noo ogolaaneysaa inaan ku horumarino howlahayaga raadinta kumbuyuutarka iyo banaanka.
Markii ugu dambeysay ee aan ka hadalno Maskaxdain Laga soo bilaabo Linux, wuxuu ahaa Janaayo 27 ee 2017, markay maraysay nooca deggan, lambarka 0.2.3. Intaa ka dib, codsigan ayaa isbeddello ku yimid horumarkiisa illaa December 5 ee 2017, markii la daabacay, the nooca xasilloon ee hadda jira, lambarka 0.3.2.
Fursaddaas hore, ayaan ku sifeynay Maskaxda sida:
"Waa qaab-dhismeed isku-dhafan, qalab furan, oo lagu soo saaray qaab elektaroonig ah by Alexandr Subbotin, oo noo ogolaanaya inaan kordhino wax soo saarkeena, helitaanka raadinta, macluumaadka, kalkuleytar, codsiyada, howlaha xirida, iyo kuwa kale, laga bilaabo hal codsi iyo iyada oo loo marayo kumbuyuutarka".
Oo yaa leh astaamaha ugu muhiimsan u janjeedha wax soo saarka isticmaalaha ahaa:
Isdhexgalka asalka ah ee hawlo badan oo hal codsi ah.
Awoodda lagu raadin karo ama loogu heli karo barnaamijyo badan dhawr guji oo keliya.
Awoodda lagu kormeerayo nidaamka feylka iyadoo la adeegsanayo horudhaca waxyaabaha (faylasha / fayl).
Waxaa ku taageeray API awood leh oo kuu oggolaanaya inaad koraan oo aad dhisto plugins kuu gaar ah.
Fududeynta helitaanka iyo adeegsiga, wakhti kasta iyo meel kasta, iyada oo ay ugu wacan tahay adeegsiga wanaagsan ee tuuryo.
1 Cerebro: Barnaamij furan oo iskutallaab ah oo loogu talagalay wax soo saar
1.1 Ku rakibidda Cerebro qaabkeeda xasilloon 0.3.2
1.1.1 Adeegsiga feylka
1.1.2 Adoo adeegsanaya .deb file
1.1.3 Isticmaalida keydadka keydka ah
1.2 Qalabaynta rakibidda
1.2.1 Fulinta Maskaxda Toosan
Cerebro: Barnaamij furan oo iskutallaab ah oo loogu talagalay wax soo saar
Ku rakibidda Cerebro qaabkeeda xasilloon 0.3.2
Sida laga soo xigtay Bogga rasmiga ah ee barnaamijka Maskaxda, waxay diyaar u tahay dadka isticmaala ee Nidaamyada hawlgalka oo bilaash ah oo furan, sida GNU / Linux, fayl il lagu rakibi karo oo qaab ah .Qaar, in ay 0.3.1 version. Intii lagu jiray Websaydhka rasmiga ah ee Teknolojiyada Elektarooniga ah, qeybta codsiyada, qayb ayaa loo heli karaa Maskaxda, iyada oo la heli karo feylasha ilaha la rakibo ee qaababka ah .Qaar y .deb, laakiin tiisa 0.3.2 version. Codsigan sidoo kale wuxuu leeyahay bog ku yaal GitHub.
Si loo rakibo Maskaxda adoo adeegsanaya qaabkan rakibayaasha iyo ka dib markaad soo dejiso faylka, kaliya amarrada amarrada soo socda waa in lagu fuliyaa:
Adoo adeegsanaya .deb file
Isticmaalida keydadka keydka ah
Kuwa jecel Ku rakib codsiyada adoo adeegsanaya goobaha wax lagu keydiyo, waxay isticmaali karaan bedel kale, oo ka kooban soo degsashada waxyaabaha soo socda .deb file in rakibi doonaa keydadka la heli karo oo ka mid ah degellada la yiraahdo, oo la yiraahdo Duck JAD - Keydinta. Taas ka dib, waxaan sii wadaynaa inaan rakibno xirmo la soo dejiyey iyo dalabka Maskaxda fulinta amarada soo socda:
Ka dib marka la rakibo arjiga Maskaxda, iyadoo loo marayo qaab kasta, waa inaan kaliya fulinaa markii ugu horeysay Bilow Qeybta / Qalabka Qalabka, u qaabee sida aan jecel nahay, oo aan doorbideyno inaan dib u bilawno kombiyuutarka gebi ahaanba, si loo qiimeeyo hawlgalkeeda oo laga bilaabo xoq.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa soo sheegi kara ku guuldareysiga fulinta dalabka, taasi waa, fulin la’aanta qaabeynta garaafka Maskaxda. Xaaladaha qaarkood, tani waa xalka ugu macquulsan:
Fur konsol xidid oo samee amarada iyo isbeddelada soo socda:
Waxyaabaha ku jira feylka beddel qiimaha halbeegga "trackingEnabled" de True by False. Keydso isbeddelada oo dib ugu tijaabi fulinta saxda ah Maskaxda.
Nuxurka faylka kama dambaysta ah config.json
Ka eeg waxbadan xalka soo socda isku xirka.
Fulinta Maskaxda Toosan
Haddii tani ay tahay xalka, kaas oo kiiskeyga si qancin leh uga shaqeeyay Mucjisooyinka 2.0, taas oo ah habeyn xad dhaaf ah iyo iswaafajin MX Linux 19, taas oo iyaduna ku saleysan DEBIYAAN 10, waxaa lagu fulin lahaa iyada oo la yareeyo astaamaha barta shaqada, markii la fuliyana waxay u ekaan doontaa waxyaabaha soo socda:
Laga bilaabo hadda, waxay u hartay oo keliya barashada sida loo isticmaalo Maskaxda, oo qaar rakib plugins la heli karo ama baro inaad sameysato mid kuu gaar ah, inaad ku kordhi waxsoosaarka qalabkan GNU / Linux.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Cerebro», taas oo ah mid xiiso leh oo shaqeyneysa ilo furan iyo iskutallaab codsi, aad u faa'iido badan in lagu horumariyo wax soo saarkeena miisaska kumbiyuutarradeena; noqo wax badan dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Maskaxda: Barnaamij furan oo iskutallaab ah oo loogu talagalay wax soo saar
Dhawaan ma la cusbooneysiiyay? Waxaan isku dayay waqtigaas anigoo raadinaya bedelka QuickSilver (QS) ee aan ku jirin GNU / Linux laakiin runtu waxay tahay ma xasuusto sababta aan u tuuray. Waqtigan xaadirka ah waxaan isticmaalaa Kupfer, ma ahan wax qumman, laakiin waxay ufiican tahay adeegsiga aasaasiga ah ee aan u adeegsado way fulisaa:
- Nuqul faylasha dhaqaaqa
- Magacaabi faylasha
- Abuur oo dhex mar fayllada iyo aaladaha kala duwan
Waxay yeelan doontaa wax badan oo hubaal ah (waxay leedahay fiilooyin) laakiin haye waa xulashooyinka aan inta badan isticmaalo, iyo maadaama ay leedahay interface la mid ah tan QS waxay iga dhigeysaa inaan ogaado.
Cusboonaysiintiisii ​​ugu dambaysay, sida maqaalku sheegay, waxay ahayd "Diseembar 5, 2017, markii nooca hadda deggan, lambarka 0.3.2, la daabacay." Si kastaba ha noqotee, si fiican ayey u shaqeysaa waxayna leedahay waxyaabo lagu daro (plugins) aad u fiican oo si fiican u shaqeynaya. Intaas waxaa sii dheer, waxay kuu ogolaaneysaa inaad gasho waxyaabo cusub oo ay abuureen kuwa aqoon u leh barnaamijyada. Haddii aad rabto inaad wax yar ka barato Cerebro, waxaan kugula talinayaa soo-gelinta soo socota, tan labaad ee 3, ee ku saabsan. Marka ugu horeysa waxaan sharxayaa noocyada kala duwan ee rakibidda, tan labaad qaabkeeda iyo isticmaalkeeda, iyo ugu dhakhsaha badan seddexaad iyo kan ugu dambeeya, maaraynta xoogaa faa iido badan leh
Xaqiiqdii, qoraalada mustaqbalka waxaan ka hadli doonaa waxyaabo ka beddeli kara Cerebro sida Kupfer iyo Albert.
mashruucu wuu dhintay, halkan waa bedel kale.
Salaan Walter! Qoraalkan ugu dambeeyay ( https://blog.desdelinux.net/albert-kupfer-excelentes-aplicaciones-alternativas-cerebro-productividad/ Waxaan kugula talinay Ulauncher laakiin ma ahan bedelka Maskaxda laakiin waa dhameystir, maadaama Ulauncher uu cuno waxyaabo badan oo xasuusta RAM ah. Waxaan kugula talin lahaa inaad u isticmaasho iyada oo aan kordhin la wadaagin Cerebro.
Nooca cusub ee Git 2.27.0 horey ayaa loo sii daayay waana kuwan isbeddelkiisa